Apple dia mividy orinasa mampifanaraka ny mozika amin'ny fitepon'ny fo | iPhone News
Apple dia mividy orinasa iray izay mampifanaraka ny mozika amin'ny fitempon'ny fo
Manerana, Apple dia mividy orinasa marobe, na dia tsy fantatsika daholo aza izy ireo. Amin'ity tranga ity, fantatsika, amin'ny alàlan'ny Bloomberg, fa ny orinasa Cupertino dia nividy fanombohana AI.Music, orinasa britanika izay mamorona hira mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy.
AI.Ny teknolojia mozika dia afaka mamorona feonkira tsy misy zon'ny mpamorona mavitrika ary afaka miova arakaraka ny fifandraisan'ny mpampiasa, toy ny fanovana ny hamafiny rehefa manao fanazaran-tena ianao.
Ao amin'ny tranokalan'ity orinasa ity, tsy misy amin'izao fotoana izao, afaka namaky izahay:
AI Music no lohalaharana amin'ny fikarohana ny fomba ahafahan'ny faharanitan-tsaina artifisialy manova sy mampifanaraka ny mozika. Raha tsorina dia mino izahay fa ny mozika dia tokony ho azo idirana sy mifanaraka amin'ny teny manodidina na ny mpamorona azy na ny mpihaino azy.
Miaraka amin'ny Infinite Music Engine sy ny teknolojian'ny tompony hafa, dia manolotra vahaolana voatokana ho an'ny mpivarotra, mpamoaka lahatsoratra, matihanina ara-batana, masoivoho famoronana ary maro hafa izahay.
Mozika mifanaraka amin'ny fitempon'ny fonao, dokam-barotra amin'ny feo mifanaraka amin'ny tontolon'ny mpihaino, fahazoan-dàlana manerantany amin'ny endrika rehetra… Azo atao izany rehetra izany, sy ny maro hafa, noho ny fikarohanay manara-penitra sy ny fampivoarana ao an-trano.
Amin'izao fotoana izao, na ny vola naloan'i Apple sy ny fikasan'ny orinasa amin'ity orinasa ity dia tsy fantatra, izay nanatevin-daharana ny fividianana tamin'ny volana aogositra lasa teo Primephonic.
Ity fividianana ity dia manana ny marika rehetra dia hampidirina ao amin'ny Apple Fitness+ manolotra fanampiny hanentanana ireo mpampiasa rehetra amin'ity sehatra ity izay efa nisy tany Espaina nandritra ny volana maromaro.
Azo inoana fa mandritra ny WWDC 2022, Apple dia hanambara ny sasany fiasa mifandraika amin'ity fividianana ityna dia mbola aloha be aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia mividy orinasa iray izay mampifanaraka ny mozika amin'ny fitempon'ny fo
Efa manana ny Betas vaovao an'ny iOS 15.4 sy dikan-teny hafa izahay
Ny AirPods Max 2 dia afaka mandeha amin'ny fanaraha-maso mikasika